सरकार ! बन्द गर ‘कृषिबाट समृद्धी’ को नारा - कृषि डेली
Home banner सरकार ! बन्द गर ‘कृषिबाट समृद्धी’ को नारा
सरकार, बन्द गर, त्यो नाका । जहाँ नेपालको अर्गानिक अदुँवा १० महिना थन्किन्छ, अनी विष बोकेका कन्टेनर बिना जाँच सेकेन्डभरमा नेपालीको भान्सासम्म पुग्छ । यदी नाका बन्द गर्न सक्दैनौ भने बन्द गर नागरिकलाई कृषिबाट समृद्धीको सपना ।
नेपालका झण्डै दुई तिहाई जनता कृषिमा आश्रित रहेका छन् । लामो समयदेखिको कामचलाउ खेती प्रणालीले नेपाललाई कृषि प्रदान देशको रुपमा अडिग राखेको छ । कृषि आम नागरिकका लागि जीवन निर्वाहको बाटो हो भने नीति निर्माण र काम गर्ने तहका लागि कमाइ खाने भाडो हो ।
नेपालमा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुको मुख्य मुद्दा कृषिमा आमूल परिवर्तनको हो । चुनावी प्रतिस्पर्धामा होस वा प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको विरोध गर्दा राजनैतिक दलले कृषिलाई भजाएर आफ्नो राजनीति गरेका हुन्छन् । काम गर्ने तहमा गइसके पछि भने तीनै कृषिको राजनीति गरेका अधिकारी कसको पोषणमा लाग्छन भन्ने अहिलेसम्म पनि नागरिकले भ्याउ पाउन सकेका छैनन् ।
कुराले देश समृद्ध बन्दैन, सरकार । कृषि क्रान्तिका लागि कुराभन्दा काम धेरै चाहिन्छ । कृषिबाट समृद्धीको यात्रा तय गर्न दलाललाई हैन, किसानलाई पोस्नु आवश्यक छ ।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, भारतीय नाकाबाट भित्रिने तरकारीको विषादी परीक्षणमा रोक । समाचारमा आए अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो प्रस्तावमा विषादी परीक्षणमा रोक लगाइयो । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा नै हुनुहुन्छ, नाकाबन्दीको समयमा राष्ट्रवादको चर्को झ्याली पिटेर स्वाधिनता पक्षधरका नायक ।
राष्ट्रवादको नाराले राजनैतीक वृतमा राम्रो प्रभाव पार्यो, परिणाम चुनावमा पनि देखियो । हो, प्रधानमन्त्री ओलीको नाकाबन्दी राष्ट्रवादले अहिलेसम्म पनि चिया पसलका ग्राहकलाई बसिबियालोको काम गरिरहेको छ ।
नाकाबन्दीको समय जस्तै अहिले पनि राष्ट्रवादका नायक केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यो समयको जस्तो ९ महिने र टेकोको भरमा अडिएको सरकारका प्रधानमन्त्री होइन । ५ वर्षे कार्यकाल अनी दुई तिहाई सरकारका प्रधानमन्त्री ।
तर आम नागरिकको दैनिक जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सवाल पनि यो सरकारले देखाएको निकम्बापन भने क्षम्य छैन । कुराले देश समृद्ध बन्दैन, सरकार । कृषि क्रान्तिका लागि कुराभन्दा काम धेरै चाहिन्छ । कृषिबाट समृद्धीको यात्रा तय गर्न दलाललाई हैन, किसानलाई पोस्नु आवश्यक छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म रहेको त्यो कृषि क्रान्तिको नारा बदल । कृषिको नाममा एनजीओ, आइएनजीओ बन्द गर । यीनै एनजीओ, आइएनजीओ हुन नेपालको कृषिलाई फडको मार्न नदिने । नेपालको उत्पादनलाई कुहाएर फाल्न उद्दत बनाउने यीनै निकम्बा निकाय हुन । जसले नेपालको कृषि क्रान्तिका नाममा आफ्नो जीवनको क्रान्ति गरिरहेका छन् ।
Previous articleयसरी गर्नुहाेस कागतीकाे व्यवसायिक खेती
Next articleEffective Systems Of Russians Brides Examined